सरकारले ४ डलरमा ल्याएको खोप चौगुणा मूल्यमा बेच्न निजी कम्पनीलाई अनुमति !
काठमाडौं : नेपालमा दोस्रो चरणको महामा’री ती’ब्र रुपमा फै’लिरहेको अवस्थामा कोरो’नावि’रुद्धको खोप लगाउनेहरुको संख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेका छन् । को’रोनाविरु’द्धको खोप केन्द्र’हरुमा खो’प लागउनेहरुको भीड नै हुने गर्दछ ।
यसैबीच नेपाल सरकारले ४ डलरमा ल्याएको कोरो’नावि’रुद्धको खोप चौगुणा बढी मूल्यमा सर्वसाधारणलाई बेच्न पाउने गरी निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । को’रोनाविरु’द्धको खोप ल्याउन अव_रोध गर्ने कम्पनी हुकमलाईलाई नै सरकारले चौ’गुणा बढी मूल्यमा खोप बेच्ने अनुमति दिएको हो ।
भारतको सेरम इन्स्टि’च्युट अफ लाइफ साइन्सबाट नेपाल सरकारले प्रतिडोज चार डलर (साढे चार सय रुपैयाँ)मा ल्याएको थियो । तर, स्वास्थ्य सेवा विभागले सोही खोपको प्रतिडोज १७ सय रुपैयाँ बढी शुल्क उठाउन हुकुमलाई अनुमति दिएको हो ।
योसँँगै सेरमको दुई डोज खोपका लागि नेपाली नागरिकले निजी कम्पनीलाई ३४ सय रुपैयाँ बढी शुल्क ति’र्नुपर्नेछ । सेरमको को’भिसिल्ड खोपसँगै भारत बायोटेकको कोभ्या’क्सिनलाई पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि औष’धि स्वास्थ्य विभागले अनुमति दिएको छ ।
भारत बायोटेकको कोभ्या’क्सिन खोप ल्याउनका लागि इब्राल्ड फर्मा’स्युटिकल्सलाई विभागले अनुमति दिएको छ । कोभ्याक्सिन खोपको मूल्य एक डोजकै २६ सय रुपैयाँ रहेको छ । यस खोपलाई दुई डोज लगाउँदा ५२ सय रुपैयाँ पर्नेछ ।
चीनको सस्तो खोप भेरो’सेलले किन अनुमति पाएन ?
सेरमको कोभि’सिल्ड खोप र भारत बायो’टेकको कोभ्या’क्सिन भन्दा पनि सस्तो मूल्य प्रस्ताव गरिएको चीनको भे’रोसेल खोपले अझैंपनि अनुमति पाएको छैन । सिनो’भ्याक लाइभ सा’इन्सको भेरोसेल खोप नेपालमा प्रयोग भइसकेको छ ।
भेरोसेल खोपको प्रतिडो’ज मूल्य १५.२ डलर (१७ सय ९३ रुपैयाँ) प्रस्ताव गरिएको छ । भेरोसेलको दुई डोजको मूल्य ३५ सय ८६ रुपैयाँ हुनआउँछ । तर, सरकारले भेरो’सेलको प्रस्ताव स्थगित गरेर ५२ सय रुपैयाँको कोभ्या’क्सिनलाई अनुमति दिएको छ ।
त्यसोत, ८ लाख डोज चिनियाँ भ्या’क्सिन अनुदानमा पाउँदा पनि रोक्न खोजिएको थियो । तर, मिडियामा पटक–पटक समाचार आउनुका साथै चीनले धेरै ताकेता गरेपछि मात्र सरकारले उक्त खोप लिन जहाज पठाएको थियो ।
भारतीय खोपका लागि बजार सहज बनाउन चिनियाँ खोप रोक्न खोजिएको विभागले जनाएको छ । साथै, यस विषयमा नीतिगत हस्तक्षेप भएको कारण विभागका कर्मचारीले पनि केही गर्न नसक्ने बताइएको छ ।
नेपालमा दुई कम्पनीको बाहेक अन्यको निवेदन आइनसकेको कारण पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको विभागले जनाएको छ । विभागले यसो भनिरहँदा चीनको भेरोसेल खोपको प्रस्ताव चैत १२ मा नै विभागमा दर्ता भएको थियो । -न्युज २४ नेपाल
२०७८ बैशाख २५, शनिबार ०९:२७ गते 1 Minute 327 Views